မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပေါင်းလို့ ဟွန်ဆန်လည်း အသုဘအခမ်းအနားနဲ့ မီးသင်္ဂြိုဟ်ဆန္ဒပြခံရ – PVTV Myanmar
အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်ကို တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေက အသုဘအခမ်းအနားနဲ့မီးသင်္ဂြိုဟ် ဆန္ဒပြလေ့ရှိရာ ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲမှာတော့ ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုပါ အသုဘအခမ်းအနားနဲ့ မီးသင်္ဂြိုဟ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
လူငယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေက ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်ရဲ့ ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်တဲ့ ခရီးစဉ်မှာပဲ အိမ်ပြန်လက် ဆောင်အဖြစ်နဲ့ ဖျာလိပ်ပတ်အလောင်းကောင်ကို မီးရှို့ပြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဟွန်ဆန် ကောင်းရာသုဂတိ-ီးမှ မလားပါစေနဲ့ ဆိုပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါအပြင် အာဏာရှင်ချင်းထွက်ပေါက်ပေး နည်းလမ်းရှာ ပလဲနံသင့်နေတဲ့ အာဏာ ရှင်ဟွန်ဆန်ရဲ့လုပ်ရဲ့ ကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – Nan Lin
Radio NUG – 10th April , 2022 Evening
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ ဗီဇာမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား သုံးဦးကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေး
2022-01-08 at 7:26 PM
“ရပ်တည်တဲ့ဘက် မှားတဲ့အခါ ပူလောင်ခြင်းဟာ သာမန်ထက်ပိုကြာတယ် ပိုပူတယ်”
အာဏာစသိမ်းတဲ့ လ အစလောက်တုန်းကတော့ “အနီ တွေ ခုတော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ”၊ “မှတ်လောက်သားလောက်အောင် လုပ်ပြလိုက်စမ်းပါ”၊ “ဖိပြီးနှိပ်ကွပ်ပြလိုက်ရင် ငြိမ်သွားမှာပါ”ဆိုပြီး အာဏာသိမ်းတာကို လူတစ်စုက ထောက်ခံခဲ့ကြတာပေါ့။
သူတို့စိတ်ထဲ အာဏာသိမ်းပြီး တွေးထားတဲ့ အနာဂတ်ကဒီလို….
NLD က မဲခိုးတယ်။ မဲခိုးလို့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတယ်။ သိမ်းသင့်တယ်။ စစ်တပ်က လုပ်စရာရှိတာလုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လုပ်ပေးမယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ငါတို့နိုင်မယ် နိုင်ရင်အာဏာပြန်ရပြီ။ဒါ့ကြောင့်ရွေးကောက် ပွဲမှာ NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းပြီး ဝင်မပါခိုင်းတော့ဘူး။
ပြီးရင် တိုင်းပြည်ကို အနိုင်ရပါတီနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီး
ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် လုပ်ပြမယ်။ စင်ကာပူလိုဖြစ်အောင်၊ ဩဇီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအတွက် ငါတို့လုပ်ရမယ်။ သူတို့လုပ်ရင် ဘာသာပျောက်လိမ့်မယ်။ ငါတို့လုပ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာတည်မြဲမယ် ဆိုပြီး အာဏာသိမ်းထောက်ခံသူတွေ တွေးခဲ့ကြတာ….
တကယ် အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်လာတာက ဒီလိုတွေ
အရင်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ အဖွဲ့တစ်ရာကျော်ရှိနေရာက အခု တောထဲမှာ PDF အဖွဲ့တွေပါ ရာနဲ့ချီပေါ်လာရုံသာမက မြို့ပေါ်မှာလည်း UG အဖွဲ့တွေ အ သီးသီးပေါ်လာတာ၊ လက်နက်ကိုင်အင်အားက အရင်ကထက် ဆယ်ဆလောက် ပိုများလာတယ်။( ဟိုနေရာကို အပစ်အခတ်ရပ် ဒီနေရာကို ပြန်ဖိ၊ ဟိုနေရာကို စစ်ရေးအင် အားဖိ ဒီနေရာကိုတပ်တွေပြန်လျှော့စစ်တပ်က အရင်ကထက် အဆတရာလောက် အလုပ်ပိုရှုပ်လာတယ်)
ဒေါ်လာဈေး ဆီဈေး အကုန်ခုန်တက်လာတယ်။
ဒီဂယက်က အနီရော /အစိမ်းရော ခံရတယ်။
အစိမ်းတွေ ဆီဆိုင်မှာ ဆီဖြည့်ရင်ပျော်နေလား သိချင်တယ်။
ဒေါ်လာဈေးတွေ အဆမတန်တက်တော့ သွင်းကုန်ဈေးတွေပါတက်၊ နောက်ဆုံး အခြေခံဈေးနှုန်းတွေ အကုန်တက်ကုန်တယ်။
အစိမ်းတွေပါမက အပြာတွေပါ ဈေးတခါသွားရင် တခါမျက်လုံးပြူးကုန်တယ်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးက လပိုင်းအတွင်းမှာ ဇောက်ထိုးထိုး ဆင်းသွားတယ်။ စင်ကာပူလိုဖြစ်မယ့်အစား အရင်တုန်းက အီသီယိုးပီးယားလိုဖြစ်သွားတယ်။
ငတ်ရင် အနီရော အစိမ်းရော အပြာရော အဝါရော အတူ တူငတ်ကြတာ။ ညဆယ်နာရီကျော်ရင် ဘယ်သူထွက်ထွက်ပစ်ခံရတယ်။ မထင်ရင်မထင်သလို အရောင်မရွေးပါတီမရွေး အကုန်အဖမ်းခံရနိုင်တယ်။
အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ အင်တာနက်ဖြတ်ရင် အကုန်အဖြတ်ခံရတယ်။ အင်တာနက်ပြန်ရလည်း အနီရော အစိမ်းရော VPN ခံရတယ်။
ပညာရေး ကျန်းမာရေး အကုန်ပြိုလဲသွားတယ်။
စစ်တပ်ထဲကလူတွေ အပြင်ထွက်လို့မရတော့ဘူး။ ကျွန်ဝယ်ရာ အဆစ်ပါသလို လင်ကရှေ့တန်းမှာ ပြည်သူတွေကို ထွက်ပြီး နှိပ်စက်နေချိန် မယားကပါ လက်နက်ကိုင်ပြီး ထိုင်စောင့်နေရပြီ။
အခုများတော့ “အနီတွေ ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ” လို့ မပြောနိုင်တော့ဘူး။ သူတို့ပါ ထိကုန်ပြီ သူတို့ပါငတ်ကုန်ပြီ။ ( ဒါတောင် ခွက်ခေါက်ရင်း ထောက်ခံနေကြတုန်း )
“ငါတို့ထောက်ခံတဲ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ရင်
ငါတို့ အနေအစားချောင်ပြီ “လို့ထင်နေတဲ့လူတွေလည်း
NLD တက်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်မယ်လို့ မှိုင်းမိခဲ့တဲ့လူတွေလည်း အခုခေတ်မှာ စစ်တပ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေပါ ဝင်စီးလို့ ကျောင်းတချို့ပိတ်ထားရတယ်။